Maxaa hortaagan dib ugu soo laabashada IGAD Ee Eretereya? – Idil News
Maxaa hortaagan dib ugu soo laabashada IGAD Ee Eretereya?
Wasiirkii Warfaafinta ee Eritrea ee xilligaasi Cali Cabdu ayaa sheegay markaasi “in ka bixitaanku uu yahay mid ku meel-gaar ah. Waxaan dareemeynaa in ay mas’uuliyad darro tahay in aan qeyb ka sii ahaanno urur goboleed qaadanayo go’aanno aan la aqbali karin marka laga eego dhanka sharciga” ayuu yiri.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in ururka uu noqday “mid ay ku adeegtaan xoogag shisheeye”, isagoo si aan toos ahayn farta ugu muuqay dowladda Maraykanka.
Wafuudda iyo xoghaynta IGAD oo la socotay ayaa waxay la kulmeen Madaxwaynaha Eritrea Isaias Afwerki, waxayna kala hadleen in Eritrea ay dib uga laabato go’aankii ay qaadatay
Meelaha labada dhinac ay ku muransan yihiin wacxaa ka mid ah jasaa’irka iyo buuraleyda Dumeira
Sanadkii 2009-ka, ayay Qaramada Midoobey soo saartay go’aan ay cunaqabateyn xagga hubka ah ku saarayso Eritrea, iyadoo lagu eedeeyay inay taageerto ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyo inay diidday inay ka baxdo dhul ay Jabuuti ka qabsatay sannad ka hor xilligaasi.
Eritrea ayaa xilligaasi sheegtay in eedeymahaasi ay ahaayeen “beenabuur” ay “dhoodhoobeen” Maraykanka iyo Itoobiya.
Dhowr sano oo cunaqabateyn iyo go’doon ah ka dib, Eritrea waxay u muuqatay inay liidatay, oo ay dooneysay inay xubinnimada urur goboleedka u adeegsato inay khafiifiso go’doonka haystay, balse way ku guuldareysatay arrintaasi.
In kastoo wafdi wasiirro ah ay dhawaan gaareen Jabuuti, oo ay muuqato yididiillo ah in la heshiinayo, ayaa haddana waxaan weli si rasmi ah heshiis u gaarin jabuuti iyo Eritrea, oo murankooda uu ku qotomo jasiiradda Dumeria ee ay labada dhinac ku muransan yihiin, hadana ku jirta gacanta Eritrea.